Tag: sawir qaadis
Waxaan la kulanay macmiil aragti leh maanta waxaanna ka wadahadalnay waxa saameyn ku yeelanaya xawaaraha xawaaraha websaydhka. Dagaal xoog leh ayaa ka socda internetka hadda: Soo-booqdayaashu waxay dalbanayaan khibrado muuqaal oo hodan ah - xitaa muuqaalka kore ee pixel-ka kore. Tani waxay wadaa sawirro waaweyn iyo qaraarro sare oo buunbuuninaya cabirka muuqaalka. Mashiinnada raadinta ayaa dalbanaya bogag deg deg ah oo leh qoraal taageero weyn leh. Tani macnaheedu waa bytes qiimo leh ayaa lagu kharash gareeyaa qoraalka, maahan sawirro.